Macbadka Megalithic ee Malta | Wararka Safarka
Mariela Carril | 30/09/2021 17:00 | La cusbooneysiiyay 30/09/2021 19:42 | Malta, Maxaa la arkaa
Dunidu wax badan bay leedahay meelo dahsoon, kuwa in yar baa la yaqaan oo wax badan la malaynayaa. Malta waa mid ka mid ah ama, si gaar ah, the macbadyada megalithic ee Malta. Ma taqaan iyaga? Miyaanay ku dhagrin?
Malta waxay ka tirsan tahay Midowga Yurub inkastoo ay yar tahay haddana waa waddan ay ku nool yihiin dad badan. Halkan, joqraafigaan la yaabka leh ee maanta ay aad u booqdeen dalxiisayaasha iyada oo ay ugu wacan tahay cimilada diiran, waxaa jira saddex Dhaxalka Aduunka iyo macbadyo badan oo megalithic ah oo ka mid ah kuwa ugu da'da weyn uguna dahsoon adduunka.
2 Macbudyada Megalithic ee Malta
Waa a dawlad madaxbannaan oo koonfurta Talyaaniga ah iyo in kasta oo ay u naxariisanaysay dalal kala duwan taariikhdeeda oo dhan, haddana, laga soo bilaabo 1964, runtii waa madaxbannaan tahay. Waa a gobolka jasiiradda oo ka kooban saddex jasiiradood, Malta lafteeda, Gozo iyo Comino. Waxaa kaloo jira jasiirado kale oo yaryar.
Cimilada Malta waa diiran xagaaga jiilaalkana roob yar baa da'a. Taasi waa sababta dalxiisayaal badan u tagaan. Xeebaheeda iyo sida iska cad, macbudyadan megalithic -ka ah ee aadka u xiisaha badan.
Malta waxaa ku yaal toddoba macbudyo megalithic ah oo UNESCO u aqoonsan tahay Goobaha Dhaxalka Adduunkas. Waxay joogaan Malta iyo jasiiradda Gozo. Midda koowaad waxaa ku yaal macbudyada Hagar Qim, Mnajdra iyo Tarxien, Ta'Hagrat iyo Skorba halka Gozo ay ku yaalliin labada macbud ee waaweyn ee Ggantija.
Dhamaan waa dhismayaal taariikheed oo taariikhi ah la rumeysan yahay in la dhisay intii lagu jiray qarnigii afaraad iyo seddexaad ee BC Waxay ka mid yihiin dhismayaasha dhagaxa ee ugu horreeya adduunka oo waxay u garaacayaan qaababkooda iyo qurxintooda. Runtu waxay tahay in dhisme kastaa yahay mid gaar ah oo heer sare u ah guusha farsamada ee ay matalaan.
Khubarada takhasuska leh waxay sheegaan in taallo kasta ay leedahay farsamo, qorshe iyo qeexid kala duwan in kastoo waxaa jira sifooyin caadi ah sida barxadda elliptical -ka ah ee hore iyo wejiga dhagaxa ah. Guud ahaan, meesha laga soo galo waxay ku taallaa xagga hore, dhexda wejiga, waxay ka furtaa marin weyn oo leh barxad laami ah oo gudahana wuxuu ka kooban yahay qolal-wareeg ah oo si siman loogu habeeyay dhinac kasta oo dhidibka dhismaha ah.
Qolladan tiro ahaan way ku kala duwan yihiin hadba dhismaha, marna waxaa jira saddex qol, marna afar ama shan, iyo malaha lix. Waxaa jira dhagxaan jiifa iyo dhagxaan waaweyn oo taaganWaxaa la rumeysan yahay inay jireen saqafyo wax walbana waxay tilmaamayaan in habka dhismuhu u muujinayo wax -soo -saar badan. Dhagaxa la isticmaalay waa laga helaa degaanka, waa dhagaxa dhagaxa ah derbiyada dibadda iyo a nuurad jilicsan gudaha iyo walxaha qurxinta. Haa, waxaa jira qaar ka mid ah qurxinta gudaha dhismayaasha sidoo kale waxay muujinayaan heer farsamo oo aad u weyn.
Maxaa ka jira walxaha qurxinta Waan hadlaynaa? Guddiyada lagu qurxiyey daloolada, ujeeddooyinka muquuninta, geedaha, dhirta iyo xayawaanka ayaan ka maqnayn. Waxaa la rumeysan yahay, laga soo bilaabo naqshadda qaabdhismeedka iyo qurxinta, in dhismayaashan qadiimiga ah qaarkood ay buuxiyeen doorka cibaado bulshadii dhistay.
Ku dhawaad ​​dhammaan macluumaadka aad ka heli doonto macbudyada megalithic ee Malta waxay ka yimaadaan qadiimiga qadiimiga ah. Cilmigan, marka la falanqeeyo lafaha, jajabka dhoobada iyo noocyada kala duwan, ayaa taas aasaasay Aadanuhu waxay ku noolaayeen Malta ilaa ugu yaraan 5200 BC. Waxay ku noolaayeen godad laakiin markii dambe waxay dhiseen guryo iyo tuulooyin dhan. Waxaa la rumeysan yahay in ka badan ama ka yar 1600 sano markii ay yimaadeen jasiiradda ay bilaabeen dhismaha macbudyadan aadka u weyn, kuwaas oo maanta aan aragno kaliya wax u eg qalfoofkooda.
Daqiiqad sharaf iyo haybad kadib waxay umuuqataa sidaas Qiyaastii 2300 BC ayaa dhaqankan cajiibka ah bilaabay inuu si degdeg ah hoos ugu dhaco.iyo. Waayo? Waxaa la rumeysan yahay xaalufinta ba'an awgeed, ciidda oo luntay, tirada dadka oo aad u badan iyo adeegsiga kheyraadka beeraha… Si kastaba ha ahaatee, wax kasta oo dhacay, dhaqankii Malta ayaa hoos u dhacay iyo ilaa imaatinkii dadka xilligii naxaasta qiyaastii 2000 BC. C jasiiraddu waa cidla.
Burburka ugu wanaagsan ee la yaqaan waa kuwa Macbadka Xagar Qim iyo kuwa Mnajdra, xeebta koonfur-galbeed ee Malta, iyagoo eegaya badda dhinaca Jasiiradda Filfla oo aan la degganayn oo ku dhawaad ​​shan kilomitir u jirta. Bannaankani wuxuu leeyahay laba nooc oo ah dhagaxa nuuradda, kan hoose oo ka adag kan Mnajdra lagu isticmaalo iyo kan sare oo ka jilicsan oo ah kan lagu isticmaalo Hagar Qim.
Hagar Qim Waxaa loola jeedaa 'dhagxaan taagan' oo intaan burburku soo ifbixin waxaa qariyay tuullo dhagaxa ah oo dhawr dhagax oo taagan korka ka soo baxeen. Macbadka waxaa la rumeysan yahay in lagu dhisay marxalado u dhexeeya 3500 BC iyo 2900 BC iyo waxay leedahay dhagxaanta ugu weyn jasiiradda. Waxaa jira dhagax weyn oo dhererkiisu yahay toddoba mitir saddex mitir oo culeyskiisu yahay 20 tan.
Burburkii ayaa markii ugu horreysay la baadhay 1839 -kii waxaana qoditaanno ka sii daran la sameeyay intii u dhexaysay 1885 -kii ilaa 1910. Xaaladda lMacbudyada Mnajdra waxay qiyaastii 500 oo mitir dhinaca galbeed ka xigtaa Hagar Qim, meel u dhow cidhifka fog ee badda korkeeda eegaya. Dhismuhu wuxuu leeyahay laba dhisme, macbud weyn oo leh laba qol oo elliptical ah iyo macbad yar oo leh qol kale.
Macbudyada fiirinta astronomical -ka? Noqon kara. Albaabka ugu weyn wuxuu u jeedaa xagga bari iyo dayrta iyo gu'ga oo u dhigma fallaadhaha ugu horreeya ee qorraxdu waxay ku dhacaan dhagax derbiga qolka labaad. Xagaaga iyo jiilaalka qorraxdu waxay iftiimisaa geesaha laba tiir oo ku jira marinka isku xira qolalka waaweyn.
Runtii waa cajiib tan iyo markaas labada xarumood ee macbudku waa kuwo astronomically isku waafaqsan oo kaliya maahan maalintii hal mar laakiin dhowr jeer: Hagar Qim, tusaale ahaan, markii waagu baryo fallaadhaha qorraxdu waxay maraan waxa loo yaqaan oracle -ka waxayna qorsheeyaan sawirka diski oo qiyaas ahaan le'eg waxa la arko dayaxa iyo, markay daqiiqaduhu dhaafaan, saxanka ayaa kora oo noqda ellipse. Habayn kale ayaa dhacda qorrax -dhaca.
Runtu waxay tahay in su’aalahan cilmiga xiddigiska ah ay aad u yar yihiin maxaa yeelay haddii aan aaminsanahay qadiimiga qadiimiga ah ee waqtigaas aqoontaas…. Waxaa jira xog qaldan. Baarayaasha kale waxay soo jeediyaan fikrado kale oo aad u xiiso badan. Isbeddeladaan waxaa farsamo ahaan loo yaqaan "xuubka ellipsis" waxayna leedahay 23 darajo iyo 27 daqiiqo.
Sidaa darteed, wareeg weyn oo ka badan 40 kun oo sano ayaa la muujiyaa oo haddii isku -dheelitirnaanta ay ku filan yihiin waxay ku dari doonaan heer khalad ah oo ay sababtay si dhab ah isbeddelkan is -beddelaya. Laga soo bilaabo qaladkan waxaa markaa suurtagal ah in la xisaabiyo xisaabta taariikhda saxda ah ee dhismaha macbudyada.
Markaa, marka laga hadlayo macbudyada Mnajdra, isku -dheelitirkoodu wuu wanaagsan yahay laakiin aad uma qumman yahay. Marka xisaabtu waxay soo jeedinaysaa in isku -dheelitirka kaamil ah ay tahay inuu dhacay ugu yaraan laba jeer 15kii sano ee la soo dhaafay: mar 3700 BC iyo mid hore, 10.205 BC. Aad bay uga weyn yihiin waxa la sheegayo.
Aad bay dhif u tahay ... Laakiin waxa ku darsanaya qarsoodiga ayaa ah in ka baxsan xiriirka uu la leeyahay xiddigaha macbudyada megalithic -ka ee Malta waxay muujinayaan heer aad u sarreeya xagga xisaabta iyo farsamaynta injineernimada. Ma ogeyd? Waxaa laga yaabaa inaysan ahayn, maxaa yeelay waxyaabaha la sameeyo xiddigaha, xisaabta, iyo guud ahaan injineernimada la dhammaystiray waxay ka baxsan yihiin qadiimiga qadiimiga ah. Sidoo kale, ma jirto adduunka wax u eg macbudyadan oo kale jiritaankeedu waa hal -abuur.
Ugu dambayn, ma ilaawi karno kakanaanta Macbudyada Hal Saflieniloo yaqaan sida Hypogeum -ka. Waxay leedahay saddex heer dhulka hoostiisa ah 12 mitir oo qotodheer, jaranjaro isdaba -joog ah oo soo degta iyo laba qol oo loo yaqaan Oracle iyo Sancta Sanctorum. Waxaa sidoo kale jira Macbudyada Tarxien, gudaheeda kaas oo a taallo weyn oo leh dherer asal ah oo laba mitir iyo badh ah, oo lagu baabtiisay sidii Goddess Hooyo.
The Macbudyada Tas-Silg iyo Macbudyada Skorba iyo biraha qariibka ah ee dhulka laga xardhay laga helay meelo kala duwan oo Malta ah oo ku milmay badda. Waxay u eg yihiin calaamadaha giraangiraha laakiin hubaal maahan. Oo maxay yihiin? Waa hagaag, qarsoodi kale.
Iyo dabcan, haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato tuhunka, isku -darka, soo -jeedinta, mala -awaalka iyo in ka badan oo ku saabsan agagaarka macbudyada megalithic -ka ee Malta waxaa jira buugag badan oo xiiso leh iyo websaydhyo. Habka ugu horreeya ee qarsoodigan wuxuu ka yimid gacanta caadiga ah: Erich Von Däniken.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Malta » Macbudyada Megalithic ee Malta